यी पाँच काम गरेमा आफ्नो मनले चिताएको पुराहुन्छ “ॐ” लेखि पूरा पढ्नुहोस् तपाईको जीवनमा ठूलो सफलता मिल्नेछ! | सुदुरपश्चिम खबर
यी पाँच काम गरेमा आफ्नो मनले चिताएको पुराहुन्छ “ॐ” लेखि पूरा पढ्नुहोस् तपाईको जीवनमा ठूलो सफलता मिल्नेछ!
तपाईले जीवनमा यस्ता पाँच काम गरेमा आफ्नो मनले चिताएको पुरा हुन्छ ॐ लेखि पढ्नुहोस् ठूलो सफलता मिल्ने छ।
हिन्दु सास्त्र अनुसार सोमबारका दिन भगवान शिव प्रति सोमबारका दिन भगवान शिवप्रति आउने उतार चढाव वा समस्या समाधानको लागि सोमवारको विहान सबेरै गौरी–शंकरलाई मनन गरी रुद्राक्ष शिव भगवानलाई अर्पर्ण गर्नाले मनले चिताएको पूरा हुने धार्मिक विश्वास गरिन्छ।२, सोमवार भगवान शिवको दिन अर्थाता चन्द्रमा का दिनका रुपमा लिइन्छ। यस दिन विहान सवेरै उठेर भगवान शिवको दर्शन गरी शिव चालीसा या शिवाष्टकको पाठ गर्नाले भगवान शिव प्रसन्न भइ समस्या समाधान हुने विश्वास गरियको छ।
यस मन्त्रको जप गर्नाले धन लाभ हुने धार्मिक विश्वास छ त्यस्तै सोमबारको विहान बेलपत्रमा सेतो चन्दनको टीका बनाएर शिवलिंगको पूजा गर्नाले पनि फलिफाप हुने धार्मिक बिश्वास रहि आयको छ । यो पनि हेर्नुस् के तपाइलाई थाहा छ नङमा देखिएको ‘अर्ध चन्द्राकार’को अर्थ ? यस्तो छ वास्तविकता
खासमा यो अर्ध–चन्द्रकार निशान सेतो नहुने भन्ने गरिएको छ । यो नङले गर्दा सेता रंगको देखिएको हो । यस निशान नङको मुनितिर हुन्छ, तर यो ढाकिएकाले नङको कारण सेतो देखिने हुन्छ । नङको मुनि यो निशान सबैमा हुन्छ, तर, यस्तो निशान सबैमा देखिन्छ भन्ने चाहीँ हुँदैन । कहिले काही एकदम फिक्का देखिन्छ ।
यदि गल्तिले नङको यस भागमा चोट लागेमा पुरै नङको बलिदान दिनपर्ने हुन्छ र फेरि पलाउने संभावना रहँदैन । यस बाहेक नङमा देखिने ‘अर्ध–चन्द्राकार’ निशानको अर्को रोचक प्रसंग छ । यदि तपाईको बुढी औँलामा यो निशान देखियो भने अन्यमा कम देखिन्छ । त्यस्तै, यदि कुनै हातका औलाहरुमा पुरा निशान देखिएमा त्यो व्यक्ति स्वस्थ्य रहेको बुझिन्छ ।
(infonpl.com बााट साभार)